विद्यार्थी आन्दोलन अब कता ? - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
विद्यार्थी आन्दोलन अब कता ?
Posted by Headline Nepal | १९ कार्तिक २०७४, आईतवार ०७:४६ |
इतिहासलाई फर्केर हेर्दा
इतिहास भनेको विगत प्रति व्यक्ति वा समाजको वर्तमान दृष्टिकोण हो । अर्थात हामीले वर्तमानको आँखाबाट विगतप्रति गरिने बिश्लेषण नै इतिहास हो ।
यहाँ उल्लेख गरिने इतिहास भनेको विद्यार्थी आन्दोलनको हो । राणाहरुले आफ्ना सन्तानका लागि स्थापना गरेका दरबार हाइस्कुल र तिनधारा पाठशालामा सबै जनताका छोरा छोरीले अध्ययन गर्न पाउनुपनर्छ भनेर गंगालालले माग गरेपछि विद्यार्थी आन्दोलनको उठान थियो । बि.स. २००४ सालको जयतु संस्कृतम आन्दोलनले नेपालभित्रै शास्त्री परिक्षा दिन पाउने व्यवस्था, संस्कृत मात्र नभएर विज्ञान, भुगोल, अर्थशास्त्र र गणित जस्ता बिषय पनि पाठ्यक्रममा समावेश गरेर अध्ययनको क्षेत्रलाई व्यापक बनाउनुपर्ने माग थियो । यसलाई नै पहिलो संगठित विद्यार्थी आन्दोलन मानिन्छ ।
यद्यपी अहिले भने विद्यार्थी संगठनहरु आफ्नो मुल ध्येयबाट बिमुख बन्दै गएको आरोप लागिरहेको छ । यस्तो आरोपलाई चिर्दै गुणस्तरिय, वैज्ञानिक र सर्व सुलभ शिक्षा प्राप्तिका लागि पहल कदमी गर्ने गहन जिम्मेवारी हाम्रो काँधमै छ ।
त्यस लगत्तै राजनीतिक स्वतन्त्रताका लागि विद्यार्थीहरुले आवाज उठाउन थाले । सो अवधीमा राष्ट्रियताका सवाल र संगठन खोल्न पाउनुपर्ने माग बुलन्द भएको थियो । पछि अनेरास्ववियु र नेपाल विद्यार्थी संघहरुको जन्म भयो र ती दुबै संगठनको स्थापना राजनीतिक स्वतन्त्रतासँगै गाँसिएको थियो । २०२८ सालमा तत्कालिन पञ्चायती सरकारले ल्याएको नयाँ शिक्षा नीतिका विरुद्ध पनि विद्यार्थी संगठनहरुले ठुलै बिरोध र संघर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए ।
निर्दलिय पञ्चायत विरुद्धको आन्दोलन चलिरहेका बेला राजनीतिक पार्टीहरु प्रतिबन्धित थिए । त्यतिबेला विद्यार्थी संगठनहरुले राजनीतिक दलको पुरकका रुपमा काम गर्थे । राजनीतिक स्वतन्त्रताको पक्षमा जनतालाई जागृत गराउने प्रयास गर्र्थे । प्रजातन्त्र कुण्ठित थियो, जनतालाई बोल्ने अधिकार थिएन, तर विद्यार्थीहरुले विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरुमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन गरेर प्रजातन्त्रको अभ्यास गरे । अर्थात संगठित विद्यार्थी आन्दोलन र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको स्थापना राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्तिको आन्दोलनसँग जोडिएर भएको हो । तथापी यी दुबै मञ्चहरुले गुणस्तरिय र वैज्ञानिक शिक्षा प्राप्तिका एजेण्डाहरुलाई पनि बुलन्द रुपमा उठाइनै रहेका थिए ।
कहाली लाग्दो वर्तमान
प्रत्येक दिन १८०२ जना नेपाली युवा विदेशिने गरेका छन् । तीनैले पठाएको रेमिटेन्सले मुलुकको अर्थतन्त्र धानिएको तथ्य कतै छिपेको छैन् ।
आर्थिक बर्ष २०७३/७४ मा ६ लाख ५८ हजारले श्रम स्विकृति लिएका छन् । श्रम स्विकृति लिनेमध्ये अधिकांश युवा विदेशीने गरेका छन् । यसरी विदेशीने नेपालीहरु अधिकांश १८ देखि ४० बर्ष उमेर समुहकै रहेको देखिन्छ । श्रम स्विकृति लिनेमध्ये ३ लाख ६५ हजार मेनपावर मार्फत, बाँकी व्यक्तिगत र रि इन्ट्रीका कामदार छन् । पाखुरामा बल भएकाहरु बिदेशिने क्रम नरोकिएसम्म देशले तात्विक रुपमा विकासमा फड्को मार्न सक्दैन् । त्यसो त विदेशीने युवाहरुलाई अर्ध दक्ष वा दक्ष जनशक्तिका रुपमा विकास गरेर मात्र पठाउन सक्ने हो भने जोखिम र आम्दानी दुबै वृद्धि हुनेछ ।
नेपालबाट काम गर्न सक्ने १८ देखि ४० बर्ष उमेर समुहका युवा मात्रै बाहिरिएका छैनन् । शिक्षित भनिएका विद्यार्थीहरु पनि अध्ययनका नाममा धेरै बाहिरिने क्रम बढेको छ । गत आर्थिक बर्षमै अध्ययनका लागि ५० हजार ६ सय ५९ जना विद्यार्थीले नो अब्जेक्सन लेटर लिएको देखिन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३२ हजार चार सय ८९ विद्यार्थीले आवेदन दिएकोमा यस वर्ष त्योभन्दा १८ हजार एक सय ७० जना बढी विद्यार्थीले यस्तो पत्र लिएका छन् ।
यस्तो पत्र लिने ५० हजार ६ सय ५९ जनामध्ये झन्डै आधा अर्थात् २४ हजार दुई सय ३३ विद्यार्थीले अस्ट्रेलियाका लागि निवेदन दिएका छन् । अस्ट्रेलिया जान चाहने विद्यार्थीले नो अब्जेक्सन लेटर लिएर मात्र भिसा आवेदन गर्ने व्यवस्था छ । अस्ट्रेलियाका लागि भिसा आवेदन गर्दा ५६० अस्ट्रेलियन डलर अर्थात् करिब ४५ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्छ । यसरी अस्ट्रेलियाको मात्रै हिसाब गर्दा करिब एक अर्ब बिदेसिएको छ । तर, भिसा भने ९ हजार चार सय ६२ ले प्राप्त गरेका छन् ।
दोस्रो गन्तव्य जापानका लागि १० हजार चार सय १६ जनाले नो अब्जेक्सन लेटर लिएका छन् । जापानमा भिसा लागिसकेपछि मात्र प्रति विद्यार्थी दुई हजार नौ सय १० रुपैयाँ शुल्क लाग्छ । जापानका लागि ९५ प्रतिशत आवेदन सफल रहेको कन्सल्टेन्सी व्यवसायीको बताउँछन् । १० हजार विद्यार्थीको भिसा लाग्दा २९ करोडको हारहारीमा पैसा विदेश गएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा तीन हजार ४८३ जनाले अमेरिकाका लागि नो अब्जेक्सन लेटर लिएका छन् । ती विद्यार्थीको भिसाका लागि मात्र २० करोड २० लाखको हारहारीमा रकम बाहिरिएको छ । अमेरिकामा भिसा लागिसकेपछि नो अब्जेक्सन लेटर लिने व्यवस्था छ ।
यसरी पाखुरामा बल भएका युवाहरु पसिना बगाउन खाडी जान बाध्य छन भने विद्यार्थीहरुको विदेश मोह पनि उस्तै ढंगले बढिरहेको छ । कामकाजी जनशक्ति र देश निर्माणका लागि योजना बनाउन सक्ने भनिएको शिक्षित जनशक्ति झन सधैंका लागि देश छाड्ने मनस्थितीमा पुग्नु भनेको देशका लागि दुर्भाग्यको बिषय हो र देश बनाउँछौं भन्नेहरुका लागि ठुलै चुनौती हो ।
देश बिर्सने रोग
उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने कुरा बेठिक होइन । तर उनीहरु उच्च शिक्षा लिएर नेपाल आउन भन्दा पनि उतैको स्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउन उद्यत हुने गरेका छन् । अमेरिका, जापान वा युरोपका बिभिन्न मुलुकहरुमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि जानेहरुले सोही मुलुकको स्थायी बसोबासका लागि पहल गर्छन् । आजकल प्लस टु अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई अब के गर्ने ? भनेर सोध्दा सहजै जवाफ आउँछ–पढ्न विदेश जाने ।
विदेशमा पढिसकेपछि के गर्ने भन्ने प्रश्न थप्दा उनीहरुको उत्तर आउँछ–उतै स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिने ।
लेखक पराजुली अनेरास्ववियु केन्द्रिय कमिटी सचिव हुन् ।
Previousलिक भयो टाइगरको लुक !
Next​११ वर्षीय बालक लक्ष्मण हत्याका आरोपी जेल चलान
२६ कार्तिक २०७४, आईतवार १६:००
कांग्रेसको जिल्ला कोषाध्यक्षको राष्ट्रिय सम्मेलन शुरु
८ पुष २०७३, शुक्रबार १२:५२
हस्तबहादुरको हत्या भएको खुलासा, छिमेकीले नै गरेका थिए हत्या
२५ श्रावण २०७४, बुधबार ०९:४०
मृत्युपछि मस्तिष्क दान गर्न वैज्ञानिकहरुको आग्रह
८ फाल्गुन २०७३, आईतवार १६:०१